‘राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्र कुनै पनि विकासमैत्री छैनन्’ – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७३ वैशाख ५ गते ५:२२
नयाँ वर्ष २०७३ को उपहारका रूपमा वैशाख १ मा नै मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य कास्कीको पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास भएको छ । गृहजिल्ला कास्कीका सांसद रवीन्द्र अधिकारीले संसद्को विकास समितिको सभापतिका हैसियतमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । कास्कीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पोखराको मात्र होइन, मुलुककै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास अधिकारीको छ । विकास समितिमा रहेर उनले मुलुकको विकास निर्माणको गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । अधिकारीले मुलुकको राजनीति, प्रशासन संयन्त्र र निजी क्षेत्र विकासमैत्री नभएको तीतो अनुभव सँगालेका छन् । विकासमैत्री वातावरण बनाउन, मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकासको सम्भावना, यसमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारे कुराकानीः
पोखरा विमानस्थलको २०७३ साल वैशाख १ गते नयाँ वर्षको उपहारकै रूपमा शिलान्यास भएको छ । त्यसमा मुख्य सबै राजनीतिक दलको सहभागिता र जनताको व्यापक उत्साहमा शिलान्यास भएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने अब हामी मुलुकमा नयाँ हिसाबबाट विकास निर्माणलाई अघि बढाउन गइरहेका छौं । तर यति नै काफी छैन । पोखरा एयरपोर्ट पोखरेलीहरूको ४० वर्षदेखिको सपना हो । ६र७ वर्षबाट लगातार प्रयास हुँदै आएको थियो । अबको ४ वर्षमा निर्माण पूरा भई विमानस्थल सञ्चालनमा आउने सुनिश्चित छ ।
हाम्रो अहिलेको विमानस्थल ९त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय० बाट वर्षको १५ देखि २० लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छैन । मुलुकमा पर्यटक बढाउन पनि निजगढ विमानस्थल अत्यन्तै अपरिहार्य छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रमुख द्वार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको वातावरण अहिलेसम्म किन बन्न नसकेको ठान्नुहुन्छ?
विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउने नारा सबै दल र नेताले लगाइरहेको देखिन्छ, तर यथार्थमा कोही पनि गम्भीर नभएको जस्तो देखिन्छ नि?
हेर्दा विकास निर्माणको विपक्षमा कोही छैनन् । तर गोल हान्न यति गाह्रो छ, विपक्षी खेलाडीजस्तै गरी सबैले रोकिरहेका हुन्छन् । हरेक मान्छेले अर्काले काम गरेकामा आरोप मात्र लगाउने प्रवृत्ति छ । विकास निर्माण कार्य गर्दा अर्को भनेको हाम्रा मिडिया, संसद्, अदालत, अख्तियार, संसदीय समिति, सर्तकता केन्द्रजस्ता ओभर साइड एजेन्सीहरूसित असाध्यै डराउनुपर्ने स्थिति छ । ओभर साइड एजेन्सीहरूलाई राजनीतिक खिचातानी गर्नेहरूले आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्छन् । हरेक कुरामा त्यहाँ खोट मात्र देख्ने प्रवृत्ति छ । अर्को जुन आयोजना अघि बढ्छ, त्यहाँ जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । वन र वातावरणको अझै समस्या छ । निजगढका निम्ति ८० प्रतिशत ठाउँ जंगल प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो सहज छैन । राजधानीकै चक्रपथमा निर्माण सामग्री अभावले काममा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण सामग्री भारतमा निकास गर्ने, तर मुलुकमा अभाव भइरहने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । हाम्रो समितिको प्रयासमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण ९आईए० र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० छोटो समयमा हुने भएको छ । वनको सम्बन्धमा पनि नयाँ आयोजनाले आफैँ रूख रोप्न सक्दैन भने उसले त्यसमा लाग्ने पैसा दिनुपर्छ । रूख रोप्ने मात्र होइन, ५ वर्षको तयारी वन किन्ने कुरा पनि छन् । अब लिजमा के पनि हुन्छ भने राज्यले ५० हेक्टर जग्गा दिन्छ, त्यहाँ ५ वर्षमा वन हुर्काइदिन भन्ने पनि हुन्छ । त्यो अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ ।
विकास निर्माणमा अर्को समस्या ठेकेदारहरूमा कस्ट र टाइम ९मूल्य र समय बढाउने० भेरिएसन गराउने प्रवृत्ति नै बनेको छ । ठेक्का र मोबिलाइजेसन खर्च हातमा पार्छन्, अनि काम सुरु गर्दैनन् । हत्तपत्त ठेक्का रद्द गर्न सकिन्न । त्यसपछि बन्द, हडताल भयो भनेर टाइम र कस्ट भेरिएसन गर्न लाग्ने गरिन्छ ।
म दाबाका साथ भन्छु, अरू जति ओभर साइड एजेन्सीहरूले जे ९विकास निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने० काम गरिरहेका छन्, संसदीय समितिहरूले पनि त्यस्तै काम गरिरहेका छन् । हामीकहाँ नकारात्मक अवधारणा छ । हाम्रा संसदीय समितिहरूमा पनि नकारात्मक अवधारणा छ । म जबदेखि विकास समितिको नेतृत्वमा आएँ, विकास निर्माणका कुरामा समितिले नो र नाइँ भन्न छाडेको छ । हामीले विकास निर्माणका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो, अल्झाइदिने होइन । नो र नाइँ भन्ने निर्णय हाम्रो समितिले गरेको छैन । हामीले सहजीकरण गरिदिने हो । संसदीय समितिहरूमा रहेको नकारात्मक अवधारणालाई हटाउँदै जानुपर्छ ।
हाम्रो विकास आयोजना समयमै बन्दैनन् भन्ने कुरा पेचिलो उदाहरण बनेको छ– खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन । त्यो प्रसारण लाइनको काम अवरुद्ध भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसलाई कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ रु
जलविद्युत्मा स्थानीयको अवरोध, ईआईएको अर्को समस्या छ, कतिपय पार्टीले विदेशी लगानीका ठूला आयोजनामा अवरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासको वातावरण बनाउन सकिन्छ रु
हामीले आम जनतालाई किन कन्भिन्स गर्न सकिरहेका छैनौं रु
तपार्इं प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सहभागी हुनुभएको थियो, त्यतिबेला नेपालमा रेल्वे सेवाको विकास गर्न के कस्ता सहमति भएका छन् रु
मुलुक अब ७ प्रदेशमा जाँदै छ । सातवटै प्रदेशमा कसरी सन्तुलित विकास गर्न सकिन्छ रु
–द्रुतमार्गले काठमाडौं–तराई जोड्छ, त्यसले मधेस र काठमाडौंबीचको ग्याप पनि हट्छ ।
– राजनीतिक नेतृत्वमा ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासबारे दृढ इच्छाशक्ति अभाव छ ।
– विकासका काम गर्न गाह्रो छ । यहाँ त रोक्नेहरू धेरै छन् ।
–संसदीय समितिहरूमा पनि नकारात्मक अवधारणा छ ।
देश कमजोर भएपछि दाताका सर्त बलिया हुन्छन् । दाताले हाम्रो दल, नेता र सरकारमा खेल्न सक्छन् । साभारः कान्तिपुर